nano Coating တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coates, nano Coating ဖုန်းများသည်မှုတ်ဆေးဘူး, မှုတ်ဆေးဘူး
ဖေါ်ပြချက်:nano Coating ရေမှုံရေမွှား,nano Coating ဖုန်းများသည်မှုတ်ဆေးဘူး,ဖုန်းသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating,ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်သည် nano Coating,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက် > ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်သည် nano Coating
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်သည် nano Coating ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, nano Coating ရေမှုံရေမွှား, nano Coating ဖုန်းများသည်မှုတ်ဆေးဘူး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဖုန်းသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မျက်နှာပြင်အဘို့အမြင့်သနျ့ရှငျးမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အအရောင်မဲ့ Transparent အရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့ကောင်းသော Optical စွမ်းဆောင်ရည် AF Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက်ပစ္စည်း Coating ပွတ်တိုက်မှု Resistance  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက် anti-အစွန်းအထင်းပစ္စည်း Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မိုးလေဝသဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့ကိုခံနိုင်ရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အ AF Coating က Non-hydrophili  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အပွင့်လင်း AF Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
AF ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက်ရေစိုခံ Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည် Nano Coating ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မျက်နှာပြင်အဘို့အမြင့်သနျ့ရှငျးမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အအရောင်မဲ့ Transparent အရည် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့ကောင်းသော Optical စွမ်းဆောင်ရည် AF Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက်ပစ္စည်း Coating ပွတ်တိုက်မှု Resistance [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon...
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက် anti-အစွန်းအထင်းပစ္စည်း Coating [ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင် features တွေသည် Nano Coating:] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon...
မိုးလေဝသဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့ကိုခံနိုင်ရည် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အ AF Coating က Non-hydrophili [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အပွင့်လင်း AF Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
AF ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက်ရေစိုခံ Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည် Nano Coating ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်များအတွက် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
တရုတ်နိုင်ငံ ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်သည် nano Coating ပေးသွင်း
1. အရောင်မဲ့အလွန်ပွင့်လင်းရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောအရည်, ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများမရှိကျန်းမာရေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အသက်ရှင်သောပတ်ဝန်းကျင်ရန်မပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ 2. ကောင်းကော်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Anti-လက်ဗွေ Anti-ညစ်ပတ်တဲ့ function ။ 3. ကောင်းတစ်ဦး antibacterial function ကိုရှိထားသည်။ 4. ရေစိုခံ, ရေနံသက်သေပြ, antifouling, antibacterial ။ 5. Anti-ခြစ်ရာ, Anti-ပွတ်တိုက်မှု, Anti-handprint ။ clean ရန်လွယ်ကူသုံးစွဲဖို့ 6. လြယ္ကူ, Self-သန့်ရှင်းရေး။ 7. အရောင်မဲ့နှင့်ပွင့်လင်း, မျက်မှောက်မျဉ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင် wear ခုခံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ 8. ဒါဟာခရမ်းလွန်အလင်းဖြင့်ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းနှင့်ရာသီဥတုခုခံရှိပါတယ်မပေးပါ။ ဒါဟာအိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ပြင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 9. Anti-ပွတ်တိုက်မှု, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ
nano Coating ရေမှုံရေမွှား nano Coating ဖုန်းများသည်မှုတ်ဆေးဘူး ဖုန်းသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်သည် nano Coating Glass ကို Nano Coating ရေမှုံရေမွှား